Alahady 08 Aogositra 2021 - FJKM Amparibe Famonjena
Alahady faha roa
“Miorena amin’ny asa tsara”
Miorena amin’ny asa tsara. Mbola izany lohahevitra izany no banjinina amin’izao alahady faharoa amin’ny volana aogositra izao, izay natokana koa ho alahadin’ny maritiora.
Notarihin’ireo Diakona ao anatin’ny Vaomieran’ny Aim-panahy ny fotoana. Rabiazamaholy Léa no nitarika ;
Ramahery Yves no nanao ny vavaka ary Rabearison Bakoly no nanao ny vakiteny. Ramatoa Raharijaona Bodo no nitondra ny hafatra.
Ny Apokalypsy 15 : 3b no novakiana nentina niderana an’Andriamanitra ary rehefa izany dia natao ny hira FF 13 : « Mihirà fihiram-baovao ».
Nanao ny fisaorana sy fiderana an’Andriamanitra ny mpitarika taorian’izany.
Nambarany ny sitrapon’Andriamanitra : « Izao no ahafantarantsika fa mahalala an’Andriamanitra isika, dia ny fitandremana ny didiny. Izay manao hoe : « Fantatro izy anefa tsy mitandrina ny didiny dia mpandainga, ary ny marina tsy ao anatiny. Ary na iza na iza mitandrina ny teniny, dia tanteraka ao aminy marina tokoa ny fitiavan’Andriamantra. Izay manao sitrapon’Andriamanitra no maharitra mandrakizay ».
Natao ny hira FFPM 1 : 1, 3, 4 : « Andriananahary, masina indrindra » ary nanao ny vavaka fifonana ny mpitarika satria tsy nahatanteraka izany sitrapony izany isika. Natao ny hira FF 35 : « Ry Tomponay ô, avia » taorian’izany.
Nambara ny teny famelan-keloka ary natao ny hira FFPM 539 : 2 : « Misaora an’i Zanahary ».
Niara-nanambara ny fanekem-pinoana laharana faharoa ny rehetra ho fanaovaozana indray ny fanoloran-tena.
Nisy feon-java-maneno fohy taorian’izay.
Zoky Hasina, mpampianatra k1 no nanatanteraka ny fotoana. Ny Soratra masina nentiny anio dia ny Jaona 15 : 5b « Fa raha misaraka Amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona ». Milaza ny hoe Jesoa no voaloboka io andininy 15 io.
Ny voaloboka raha tapaka dia tsy mamoa intsony. Raha miaraka amin’ny Tompo isika dia mahavita zavatra lehibe. Naka fanoharana ny amin’ny tantaran’i Davida sy Goliata izy tamin’izany.
Davida mbola zaza dia efa nanana ny herin’Andriamanitra, ary vonona foana izy hisedra ny mafy rehetra. Dia toy izany koa isika rehetra hoy ny mpitarika.
Niara-nitsangana namerina izany ny fianakaviamben’ny Sekoly alahady ary nofaranany tamin’ny vavaka izany.
Razafimaharo Mamy, Mpitantsoratry ny Fiangonana, no nitondra ny raharaha. Anisan’ny voalaza tamin’izany ireto manaraka ireto :
Nahatratra 7 481 800 Ar ny rakitra, voady, fanohanana Mpitandrina ;
Ny zanaky ny Fiangonana Rakotondrahova Antsa dia hampiakarin-dRandria Rakotoarimalala ny sabotsy 21 aogositra 2021 ;
Ny zanaky ny Fiangonana Rakotoarivony Tiana dia hampiakarin-dRazanakoto Ulysse ny sabotsy 14 aogositra 2021.
Nodimandry ny 5 aogositra teo amin’ny faha 74 taonany Ramatoa Rasoazananaivo Clarisse Hantasoa ;
Nodimandry teo amin’ny faha 70 taonany Ramatoa Andrianalison Fara Perline.
Nanao fampahafantarana sy fanentanana ny vaomieran’ny Aimpanahy ny amin’ny rojombavaka nosoloin-dRanarison Francky tena. Hapetraka ny vata ho an’ireo olona izay maniry handray anjara amin’ny rojombavaka.
Nisy ny fanoloran-jaza taorian’ny raharaham-piangonana ka ny zaza Rakotoarivony Tiavina Raphael, zana-dRakotoarivony Mamy Tahiana sy Randimbison Manitra Valérie, izany.
Nanao fanentanana ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina taorian’izay. Nambarany fa efa manomboka ny asa ao amin’ny trano atsimo.
Hanainga amin’ny Synoda lehibe ny Mpitandrina mivady anio atoandro ary hanao fialantsasatra ihany koa. Nampahafantariny fa tokony hoentina am-bavaka izany satria zava-dehibe ho an’ny Fiangonana FJKM no hodinihina.
Hitondra am-bavaka ireo handeha amin’ny tafika masina amin’ny fotoana vavolombelona. Olona 8 : 4 lahy, 4 vavy, no handeha ary any Bevoay ny toerana. Ny 13 aogositra no hanainga izy ireo.
Niarahaba ireo tokantrano vao koa ny Mpitandrina, dia Andrianarisoa Zo Andrianina sy Andriamandimbisoa Fy.
Nisy moa ny fanolorana ny zaza RAKOTOARIVONY Tiavina Raphaël araka ny voalaza etsy ambony.
Ralaindimby Haja, Mpitantsoratry ny vola, no nilaza ireo raki-pisaorana sy voady. 3 no nangataka ny hiran’ny RFF noho ny fiantrehina ny fanadinana amin’ny herinandro. Nisy ny hira FF 11 : 1 : « Faly aho » ; FFPM 613 : 1 : « Mpiandry lehibe » ; FF 12 : 1 « Am-pelantananao ry Raiko » ; FFPM 480 : 3 « Mamin’ny foko, ry Jesoa ô ! »
Ho fanolorana ny rakitra dia natao ny FFPM 275 : 1 : « Raisonao ry Tompo soa».
Natao ny FF 4 : 1 « Ry Fanahy ô ! » mialoha ny vavaka sy ny vakiteny. Ny perikopa anio moa dia ny Salamo 31 : 1 – 8, Matio 21 : 33 – 46, ary Asan’ny Apostoly 7 : 51, 8 : 1.
Natao ny hira FFPM 243 : 1, 2, 3 : « Mivory eto izahay », mialoha ny toriteny
Rehefa manaraka ny vakiteny isika dia afaka milaza fa asa tsara amin’ny fanarahana ny Tompo koa ny fanaovana ho maritiora.
Maritiora dia midika hoe vavolombelona eo anatrehan’Andriamanitra. Ny Asa 7 : 51, Asa 8 : 1.
Afaka homena lohahevitra hoe Stefana, vavolombeolon’ny Tompo izany satria :
Sahy manambara ny Tompo amin’ny fotoan-tsarotra izy ary
Ny maritiora dia vonona hiaritra fahoriana hatramin’ny fahafatesana
1 / Sahy manambara ny Tompo amin’ny fotoan-tsarotra izy
Stefana dia feno fanahy sy fahendrena, ka voafidy ho Diakona izy. Sady matahotra an’Andriamanitra izy no manaja olona.
Stefana dia efa nifanandrina tamin’ireo mpitondra fivavahana jiosy. Nasehon’i Stefana fa :
Maritiora izy ary milaza ny marina hatramin’ny farany
Sahy mijoro ho vavolombelona izy noho ny amin’ny Tompo.
Nahoana izy no sahy nanao an’izany ? Satria azony antoka ny Tompo izay miaraka aminy. Hitantsika, hoy ny mpitarika, fa toy izany koa Davida.
Davida dia maneho ny fanantenana izay ho ataon’Andriamanitra aminy.
Tokony ho toy izany isika kristiana, hanahaka an’i Davida sy Stefana. Tokony hifampirisika ny amin’ny fiheverana izay hanaovana asa tsara avy. Ao ny Tafika masina izay hotanterahintsika. Tokony olona mahatoky isika any amin’ny sampana misy antsika.
Tokony hetahetantsika ny fanavaozana ny fanoloran-tena. Nasain’ny mpitondra ny hafatra nitsangana ny Fiangonana ary nanao ny hira FFPM 645 « Ry Jesoa kapiteninay ».
2 / Maritiora dia vonona hiaritra fahoriana hatramin’ny fahafatesana
Araka ny Soratra masina, ny maritiora dia :
Olona miaritra fahoriana noho ny finoana maro fototra ao anatiny
Olona sahy mijoro ho vavolombelon’i Kristy.
Samy hita tao am Stefana avokoa izany. Fantatr’i Stefana fa rehefa voafidy ho Diakona izy dia hisy sedra ho hatrehiny.
Tao amin’ny bokin’i Matio dia milaza fa tokony ho vonona isika amin’ny fanaovana ny asaNy. Misy ireo irak’Andriamanitra ary ireo olona ireo dia tahaka ny maritiora mihitsy.
Isika irak’Andriamanitra dia tokony hanana fanantenana mandrakariva eo am-panaovana izany asa tsara izany. Tokony tsy hatahotra satria Izy Tompo miaraka amintsika. Mbola ho avy ny fotoana hanehoan’Andriamanitra izany fahalebiazany izany.
Tsy menatra ny amin’ny fitenenan-dratsy ataon’ny sasany.
Vonona isika handeha ho irak’Andriamanitra. Natao ny hira FFPM 639 : 3 « Ry miaramila, mandrosoa izao » ho fanamafisana izany hafatra izany.
Hampirisihina isika hiorina tsara satria izany no hahatanterahina ny asaNy.
Jesoa no milaza amintsika fa homba antsika mandrakariva mandra-pifaran’izao tontolo izao.
Nanao ny anjara hirany ny STAF taorian’ny toriteny.
Nanao ny vavaka fangatahana ny Mpitandrina izay nofaranana tamin’ny « Rainay izay any an-danitra ».
ASA VAVOLOMBELONA SY FAMARANANA NY FOTOANA
Nisy roa ny Asa vavolombelona dia ny fanaovana batisa sy ny fitsofan-drano ireo mpiantafika.
Natao ny hira «Teo an-tratranao Jesosy » raha namonjy ny alitara ireo zaza sy ny ray aman-dreniny. Zaza roa no natao batisa dia :
Razafimbelo Irinaina Abby
Misy kosa ny fitsofan-drano ireo mpiantafika taorian’izay.
Rehefa izany dia natao ny FF 12 : 1 « Am-pelantananao ry Raiko ».
Novakiana ny tondrozotra 2021, nomena ny tso-drano ary natao ny vavaka mangina nofaranana tamin’ny Trinite masina.
Feon-javamaneno no namaranana ny fotoana.
Nikirakira ny fafana : RAHARIJAONA Solofonirina
Nikirakira ny fanamafisam-peo : RANDRIAMAHEFA Tianarivony
Nitendry orga : RABIAZAMAHOLY Hery Lanto & HARENTSOA Rova